“Budhcad ahaan Ayaanu ula Macaamili Kalluumaysatada Shiinaha iyo Cid kasta oo Lagu Qabto Xeebta Somaliland” |
“Budhcad ahaan Ayaanu ula Macaamili Kalluumaysatada Shiinaha iyo Cid kasta oo Lagu Qabto Xeebta Somaliland”
Hargeisa(GNN):-Xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland ayaa shaacisay in aanay xeebaha dalka iman karin 27 Markab oo Shiine ah oo dawladda a fadhiidka ah ee Soomaaliya ay siisay ruqsado Kalluumaysi.
Shabakadda Ghana Modern oo fallanqeysa Arrimaha Afrika, oo maanta daabacday Xukuumadda Somaliland oo mowqif adag iska taagtay in xeebta JSL ay soo galaan kalluumaysatada sharci darrad ah ee Soomaaliya ka sita waraaqaha ogolaanshaha.
Wasiirku wuxuu ku dhawaaqay inay ula macaamili doonaan budhcad-baddeed ahaan Kalluumaysatada Shiinaha iyo cid kasta oo lagu qabto iyadoo si sharci darro ah uga kalluumaysata xeebaha Somaliland.
Siday werisay Ghana Modern, waxaa Wasiirka Xannaanada Xoolaha iyo Kalluumaysigu xaqiijiyey in aanay xeebaha Somaliland ku arag Kalluumaysato sharci darro ah oo Shiine ah, hase yeeshee ay arkaan doonyo kalluumaysi oo laga leeyahay Yeman.
Wasiir Xasan Gaafaadhi wuxuu intaas ku daray inay dalka ka hirgaliyeen lix goobood oo la dhigay qaboojiyeyaal loogu talogalay inay kalluumaysatadu ku keydsadaan kalluunka ay soo jilaabtaan.
Wasiirka Xannaanada Xoolaha iyo Kalluumaysigu wuxuu carabka ku dhuftay in Kalluunku uu yahay khayraadka kaliya ee Somaliland leedahay,maadaama oo abaaraha iyo isbeddelka cimiladu ay saameeyeen xoolihii noolaa.
“Waa khayraadka kaliya ee aanu haysanno kalluunku,”ayuu yidhi Wasiir Xasan oo intaas ku daray “Haddii abaaraha iyo isbeddelka cimilladu ay sii kordhaan waxay saameynayaan xoolaha nool, sidaas awgeed waa khayraadka kaliya ee aanu haysanno kalluunku, waana inaanu ilaashano oo aanu si wax ku ool ah u nidaamsanaa hannaanka kalluumaysiga.”